Buuhoodle K.news: Ururka dhalinyaradda BYVO ayaa shir jaraaid oo ay qabteen ku taageeray horumarka ka jira Buuhoodle iyagoo si aad ah ugu nuuxnuuxsaday in ay meel looga soo wada jeesto cidkasta oo falal nabad gelyo xumo ka wada deegaanka.
Iyadoo Markasta Jaaliyadaha Qurba-joogta Sool, Sanaag iyo Cayn (SSC) ay sharaf, tixgelin iyo bogaadin u hayaan Isimada, Cuqaasha iyo Waxgaradka reer SSC, waxaan si gaar ah halkan maanta, bogaadin iyo salaan qaali ah gu diraynaa xurmadle Caaqil Maxamed Ismacil Gurux
Waxaa jaaliyaduhu aad ugu dirsadeen uguna riyaaqeen, hadalkii qiimaha lahaa ee Caaqil Maxamed Ismaciil Gurux shalay Feb. 4, 2016 mareegaha iyo idaacadaha ka sheegay.
Caaqil Maxamed ayaa dhammaan shacabka SSC iyo gaar ahaan kan Buuhoodle, gobolka Cayn ugu baaqay nabadgelyo iyo inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khalkhal iyo ammaan darro degaanka ka abuuri karta. Caaqilka ayaa fidnoolayaal ku tilmaamay kooxda is magacawday ee Khaatumo ee hadda Buuhoodle ku sugan, hadalladooda iyo ficilkoodana ku tilmaamay waxba kama jiraan.
Caaqil Maxamed Ismacil Gurux, ayaa wuxuu kale oo cuqaasha iyo beelaha ay ka soo jeedaan raggaas dhowaan ka hadlay Buhoodle ugu baaqay inay arrimahooda soo farageliyaan, waxna ka qabtaan, kana xakameeyaan khalkhalka iyo xasiloonidarrada ay Buuhoodle ka dhex wadaan. Caaqilku Farta ayuu ku fiiqay Cali Khalif iyo Ina Shiikh Cumar, iyagoo dhowaan cuqaasha ka daba hadlay oo naqdiyey, kuna goodiyey xasilooni darro, aflagaado iyo deelqaafna u geystey Cuqaasha, Isimada iyo waxgaradka Buuhoodle iyo dhammaan shacabka SSC.
Haddaba, dhammaan qurbajoogta SSC ee ku kala nool daafaha dunida, waxaan si xushmad iyo qadarin mudan uga codsanaynaa Isimada, Cuqaasha iyo Wax-garadka ku dhaqan dhammaan deegaanka Sool, Sanaag iyo Cayn, inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo nabadda degaanka lid ku ah, kana dhex abuuri karta khalkhal iyo jaahwareer ku yimaadda xasiloonida shacabka SSC, ayna ku dhiiradaan siday farta ugu fiiqi lahaayeen, shacabkana uga qaban lahaayeen kuwaas fitno-wadayaasha ah.
Waxaan mar labaad u mahad celinaynaa dhammaan Isimada, cuqaasha iyo waxgaradka SSC, oo mar kasta heeganka u ah, una taagan ilaalinta nabadgelyada iyo maslaxadda shacabkooda xilkaas u igmaday, Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo talada sanna waafajiyo. aamiin….aamiin….aamiin.
Boosaaso – K.news: Waxaa caawa lagu dilay gudaha magaalada Boosaaso ganacsade Xirsi Aadam(Xirsi Aduunyo) oo kamid ahaa ganacsatada ugu waaweyn deegaanada Puntland siiba Boosaaso.